FADEEXAD: Da'yarkii Kooxaha Badan Diiday Ee Matthijs De Ligt Oo Juventus Ku Ceebaysan & Xogta Caddaynta U Ah Inuu Fashilmay - Gool24.Net
FADEEXAD: Da’yarkii Kooxaha Badan Diiday Ee Matthijs De Ligt Oo Juventus Ku Ceebaysan & Xogta Caddaynta U Ah Inuu Fashilmay
May 20, 2020 Apdihakem Omer Adem
Da’yarka kooxda Juventus ee Matthijs De Ligt oo suuqii xagaaga ee sanadkii hore kaga soo biiray dhinaca Ajax isla markaana la xasuusto inuu kooxo tiro badan oo saf dheer ugu jiray ku gacan saydho ayaa wakhti adag ku qaadanaya kooxdaas.
De Ligt ayaa ugu horreynba keyd ka noqday Juventus isagoo xataa aan ahayn bedelka koowaad maadaama oo ay wada ciyaarayeen khubarada ree Talyaani ee Leonardo Bonucci iyo Giorgio Cheillini isla markaana uu kusoo xigay daafaca ree Turkey ee Merih Demiral.
Kahor intii aan la kansalin xilli ciyaareedka, De Ligt ayaa helay fursad wanaagsan maadaama oo ay wada dhaawacmeen kabtan Cheillini iyo waliba Demiral isaga oo lamaane daafac lasoo ahaa Bonucci.
Xogta muujinaysa inuu ilaa haatan De Ligt ku ceebaysan yahay Juventus ayaa ah in kulamada uusan shaxdeeda kusoo bilaabanin ay dhammaantood soo wada guuleysteen oo aysan xataa hal kulan bar-bardhac lasoo gelin koox isaga oo maqan.
Dhinaca kale kulamada uu De Ligt kusoo bilawday oo 17 ah ayay Bianconeri soo guuleysteen 11 kulan iyagoo saddex kulan afka ciido loo daray isla markaana saddex kale bar-bardhac lagu soo qabtay.
Kulamada uu Matthijs ma maqnaa shaxda Juve oo 9 ahaa ayay kulan kasta cel-celis ahaan soo dhalinayeen 2.22 gool halka cel-celis ahaan laga soo dhalinayay 0.67 gool.
Kulamada 17 ah ee uu da’yarkan ree Netherlands shaxda Bianconeri kusoo bilawday ayay soo dhaliyeen 1.76 kulankiiba halka iyagana laga soo dhalinayay 1.06 kulankiiba.
Halkan Hoose Kaga Boggo Shaxda Xogtan Muujinaysa